Sacuudiga oo noqday dalka 2aad Dunida ee soo dhoofsada hubka (Daraasad cusub) – Kasmo Newspaper
Updated - March 17, 2018 11:40 am GMT
London (Kasmo), Bariga Dhexe, 5tii sano ee u dambaysay, wuxuu noqoday midka ugu weyn ee Caalami ahaan soo dhoofsada hubka, sidaana waxaa muujinaysa Daraasad uu sameeyay SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) ee dusha kala socda xajmiga ganacsiga muddada gaaban ee hubka.
Sida ku cad xogta Dokumentiga Machadkaas oo la baahiyay maalintii Isniinta 12kii March, hubka loo dhoofiyay Bariga Dhexe, intii u dhaxaysay 2013-2017, wuxuu sare u dhaafay 2 jibbaar, isaga oo gaaray 103% marka loo eego 5tii sano ee ka horreysay.
Bariga Dhexe waxaa markaas gaaray 32% hubka laga dhoofiyo dunida oo idil, sababta ugu weynina waa dagaallada iyo xiisadaha ka huraya Gobolka.
Sababtaa darteed, Sacuudi Carabiya waxay gashay kaalinta 2aad, India ka dib iyada oo 5tii sano ee warbixinta lagu lafaguray, hubka dalkaasi soo iibsaday sare u kacay 225% marka loo eego muddadii 2008-2012.
Wakhtigaan la joogo Sacuudi Carabiya waxay ku hawlantahay colaadda Yaman oo ay dagaal kula jirto Xuutiga, iyada oo hor kacaysa isbahaysiga Carabta ee ka kooban Baxreyn, Masar, Kuwait, Sudan iyo UAE.
Dalalka ugu weyn ee hubka u dhoofiya Sacuudi Carabiya waa Maraykanka iyo Britain oo xajmiga hubka ay ka iibiyaan Boqortooyadaas lagu qiyaasay 61% iyo 23%, sida ay isugu xigaan. Sidaa darteed, booqashadii Maxamed Bin-Salmaan ee Britain, 9kii March, London iyo Riyadh waxay kala saxiixdeen heshiis hordhac ah oo ay ku baxayso Balaayiin Giniga Isterliinka.
Sida laga xiganayo Shirkadda ‘BAE Systems’ ee Britishka, lacagtaas waxay ku baxaysaa iibka 48 Jet oo nooca dagaalka ‘Eurofighter Typhoon’, heshiiskaas oo dhaliyay carada Ururrada Aadamiga. Gaar ahaan Save the Children, kuwaas oo dibadbaxyo ka sameeyay go’aankaas si ay ugu soo jeediyaan dareenka, waxyeellada ay sababeen bambooyinka lagu farsameeyo Britain.
Asia waxay ku jirtaa kaalinta 1aad ee iibsashada hubka, intii u dhexaysay 2013-2017 Gobolku wuxuu qayb ahaan u helay 42% isu geynta guud ee hubka dibadda loo dhoofiyo dunida. Dal ahaan India waxay gashay kaalinta 1aad dalalka hubka la soo daga, iyada oo Russiya tahay dalka ugu weyn oo daboola 62% baahida hubka ee India oo xiisad kala dhexayso Pakistan iyo China.
China qudheeda ayaa sii noqonaya dal awood u leh in uu soo saaro hubka, siina xoojinaya xiriirkiisa dalalka Pakistan, Bangladesh iyo Myanmar oo dhammaantood uu hub u dhoofiyo. Peking oo xajmiga hubka ay dhoofiso, 5tii sano ee u dambaysay sare u kacay 38%, waa dalka ugu weyn ee hubeeya Myanmar 68%, sidoo kale Bangladesh 71% iyo Pakistan 70%.